Kushone abantu abayisithupha imoto ishayisa unqenqema lomgwaqo | News24
LAST UPDATED: 2018-11-14, 14:02
Kushone abantu abayisithupha imoto ishayisa unqenqema lomgwaqo
Johannesburg - Kushone abantu abayisithupha okubalwa nengane ngoLwesihlanu ebusuku ngemuva kokuthi itekisi abebeligibele lishayisa unqenqema emgwaqeni omkhulu u-M2 ngaphambi kweGeldenhuys Interchange, eGermiston, eKurhuleni.
Abe-Ekurhuleni Disaster and Emergency Management Services (DEMS) uthe itekisi ibithwele abantu ababalelwa ku-19 kwathi umgibeli oyedwa wakhafulwa yitekisi ngesikhathi ishayisa unqenqema lukathelawayeka.
"Kushone abantu abayisithupha endaweni yesigameko, kwathi abanye ababili balimala kabi, abangu-9 bathole imihuzuko," kusho i-DEMS.
OLUNYE UDABA: Kushone 10 wabantu esigamekweni esihlobene 'nodlame lwabamatekisi' eKZN
"Umshayeli nezingane ezimbili bangabanye babalimele."
Abalimele baphuthunyiswe eCharlotte Maxeke Hospital naseHillbrow Clinic - eGoli - naseBetha Gxowa Hospital, eGermiston.
Abezokuthutha eKurhuleni besebenzisana nabe-SAPS bayaphenya ngale ngozi.
Kwesinye isigameko, kushone abantu ababili ngemuva kokugingqika kwetekisi ku-N2, phakathi kweSt Francis Bay nePort Elizabeth ngoLwesihlanu ntambama.